Soosaarayaasha 2.5D - Shiinaha 2.5D Warshad & Shirkado
2.5D Anti Blue Light Muraayadaha Muraayadaha Muraayadda ee iPhone 12 taxanaha
OTAO kahortaga buluuga ah ee ilaaliyaha shaashadda ayaa indhahaaga ku ilaalin doona oo ka dhigi doona isticmaalkaaga iPhone khibrad aad u raaxo badan. 9H on Moh ee miisaanka adag ee macdanta iyo muujinta daahan oleophobic oo ku daraya lakabka ah ee iska caabin smudge. Si ka duwan alaabada kale ee suuqa, ilaaliyeyaasha shaashaddeennu waxay hayn doonaan saxnaanta midabka iyo firfircoonaanta iPhone-kaaga adiga oo ilaalinaya dareenka taabashada.
2.5D High Clear Anti-Boodh Muraayadaha Muraayadda Muraayadda Wixii taxanaha iPhone 12
OTAO 'tiknoolajiyada anti-ka-taagan, samee ilaaliyaha shaashadan oo si buuxda uga soocda siigada.waxaad siisaa ilaalin buuxda oo loogu talagalay taxanaha iPhone 12, oo ku habboon taabashada taabashada .Waxa kale oo ay bixisaa faro-ka-hortagga iyo guryaha hydrophobic.
2.5D 0.33mm Caddaraa Muraayada Muraayadaha loogu talagalay iPhone 12 taxanaha
100% Transparent & ultra clear: ilaaliyaha shaashadda gaarka u dhow ee aan muuqan ee HD LCD Screens, NO Rainbow Effect. Saameyn sare & Ilaalinta xoqida: khafiif khafiif ah oo leh difaac aad u sareeya oo ka yimaada dhibcaha saamaynta sare, xoqida, xoqida, iyo kuuskuusyada! Kiiska Saaxiibtinimada leh: OTAO Protector Screen wuxuu si sax ah u jaray inuu ka yaraado shaashadda dhabta ah ee taleefanka casriga ah si looga hortago buuq marmarka qaarkood ah ee Kiiska Taleefanka aad ugu jeceshahay. Xasaasi ah & jawaab deg deg ah: ilaaliyaha shaashadda, y ...
2.5D Anti Blue Light Fudud Muraayada Muraayadda Muraayadda ee Taxanaha Ipad
OTAO kahortaga buluugga ah ee muraayadda muraayadda muraayadda muraayadda ah ayaa miiraya illaa 43% iftiinka buluugga ah ee waxyeellada u leh ee ay soo daayaan aalado badan oo elektaroonig ah oo macaamiisha ka mid ah, kana ilaaliya indhahaaga dhibka isha dhijitaalka ah. Intaa waxaa dheer, waxay ka ilaalisaa taleefankaaga dhibcaha, wuxuu daboolayaa gees ilaa gees si loo ilaaliyo inbadan oo shaashadda ah, wuxuuna leeyahay Ultra-Fresh antimicrobial ilaalinta oo yareynaya 99% koritaanka bakteeriyada dusha sare ee nolosha iPhone-kaaga.